Spaoro mekanika: Nodimandry i Faly Be "Le Roi Lion"
dimanche, 26 juillet 2020 15:10
Misaona ny tontolon’ny spaoro mekanika, nodimandry tao an-tranony ny marainan’ity alahady 26 jolay 2020 ity i Andrianafetra Faly Robinson, nantsoin’ny namany Faly Be na "Le Roi Lion" teo amin’ny sehatry ny hazakazaka fiarakodia.
Filoha lefitry ny « Fédération du Sport Automobile de Madagascar » na FSAM izy.
Raha ny tsiahy fohy dia nianatra ho mpanamory fiaramanidina tany Etazonia i Faly Be, ary niverina an-tanindrazana ny taona 1994. Nirotsaka tamin’ny fifaninanana fanamoriana fiarakodia izy nanomboka teo, ary fiara Peugeot fantatra amin’ny marika liona, hatrany no nentiny, niandohan’ny « Le Roi Lion », zary raikitra niantsoan’ny namany azy.
Peugeot 504 no niandohany, avy eo Peugeot 106 Kit Car, ary Peugeot 206.
Mpitantana ny Serana Racing Kart Imerintsiatosika ihany koa izy.
Nisehatra tamin’ny asa sosialy sy politika ihany koa i Andrianafetra Faly Robinson. Mpanolontsain’ny tanàna tao Imerintsiatosika izy, mpiray lisitra tamin’ny fifidianana solombavam-bahoaka tao amin’ny Distrika Arivonimamo farany teo.